Dib u eeg Wavefun X-Pods, sameecadaha dhagaha sida Apple Airpods! | Androidsis
Dib u eeg Wavefun X-Pods, qaar ka mid ah taleefannada dhagaha ee Apple Airpods oo tayo leh oo keliya 55 Euro oo laga heli karo Amazon Prime
Hadaad jeceshahay Apple Airpods nooca dhegaha laakiin ma awoodi kartid inaad qarash gareyso ku dhowaad 200 oo Euro oo ah dhagaha dhageysiga tufaaxa, maanta nasiib ayaad ku jirtaa maadaama aan u maleynayo inaan kuu keenay badeecada ugu fiican ee la xiriirta tayada / qiimaha / dammaanadda oo si fiican ugu eg Airpod-yada Manzana. Sameecadaha dhagaha waa kuwa kale oo aan ahayn Wavefun X-Pods waana waxaa laga heli karaa Amazon Prime oo si bilaash ah ku bixinaysa hal maalin oo keliya 54,99 Euros.
Kaliya qoraalkan waxaan kaaga tegayaa dhameystiran Dib u eegista fiidiyowga ee 'Wavefun X-Pods', taas oo aniga ah mid ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan ee la heli karo hadda haddii waxa aad rabto ay tahay inaad ku raaxeysato dhagaha dhagaha oo aan lahayn fiilo ugu yar oo ka careysiisa khibradaada isticmaale, marka waxaan kugula talinayaa inaadan ka maqnaan tan iyo markii lagu daro inaan ku siiyo Dareennada ku saabsan kuwan 'Wavefun X-Pods', waxaan sidoo kale ku tusayaa hannaanka loo raacayo si loogu waafajiyo headphones-kan casrigaaga Android.
1 Navefun X-Pods naqshadeynta iyo dhammeynta
2 Tayada codka iyo isku xirnaanta Bluetooth 4.1
3 Isticmaalka, qeexitaannada farsamo qaarkood iyo shaqeynta Wavefun X-pods
4 Sida loo waafajiyo Wavefun X-Pods
4.1 Habka keli ah iyo qaabka rikoodhka
4.2 Habka Sare (Tayada ugu Badan ee Codka)
5 Fikradahayga shaqsiyeed iyo isku xirka iibka Amazon
Navefun X-Pods naqshadeynta iyo dhammeynta
Ku saabsan qaabeynta iyo dhammeystirka kuwan Wavefun X-Pods, taas oo aniga ii ah ikhtiyaarka iibsiga beddelka ugu wanaagsan ee Apple Airpods, Waa inaan kuu sheegaa tan iyo soo bandhigida sanduuqa ay ku jirto xirmada, ilaa naqshada iyo qalabka dhismaha labadaba sanduuqa loo isticmaali doono in lagu keydiyo oo lagu qaado X-Pods-ka markasta la soo dalaco, iyo sidoo kale dhammaadka dhagaha dhagaha laftiisa, waa la arki karaa jaleecada hore iyo kahor inta aadan taaban sheyga inay shey tahay dhameystir tayo sare leh oo aan waxba ka hinaasi karin dhagaha taleefannada Apple ee aadka u wireless-ka ah.
Sidaa darteed, sanduuqa xarrago leh ee raaxada leh ee ay ku keydsan yihiin X-Pods, a sanduuq ay ku jiraan balaastig tayo sare leh oo iyaduna ah nooc ka mid ah Power Bank oo noo oggolaan doona inaan ka qaadno sameecadaha dhagaha wax yar ka badan laba lacagood oo buuxa, Waxay ku habboon tahay in lagu awoodo in si raaxo leh loogu qaado jeebka surwaalka iyada oo aan ficil ahaan la ogaan in aan wadno.
Marka laga hadlayo dhammeystirka X-Pods-ka laftirkooda, waxaan leenahay xoogaa halo ah oo laysku beddeli karo oo ka samaysan nooc caag ah oo caag ah oo leh taabasho aad u jilicsan oo xasaasiyadeed, Qeybta dambe ee qeybta Motorola terminals, oo si fiican ula qabsaneysa dhagahayaga kana hortageysa inay si joogto ah u siibato sida ay ugu dhacdo dhagaha dhagaha kale ee qaabka.
Naqshadeynta ayaa ah mid xarrago leh halka ay ka jiraan in kasta oo badeecaddu ay gebi ahaanba ku dhammaatay saddex nooc oo caag ah, Balaastiigani waxaa lagu xusay inay yihiin kuwo tayo sare leh oo iska caabin ah marka lagu daro bixinta miisaanka ugu yar ee alaabta Taas oo ah dhegeysiga dhegaha, runta ayaa ah in si weyn loo qiimeeyo.
Tayada codka iyo isku xirnaanta Bluetooth 4.1
Sida aan had iyo jeer sameeyo tan iyo markii aan jecelahay inaan isticmaalo luuqad qof kastaa fahmi karo oo fahmi karo, qaybtan dhawaaqa ah kuma khal khal galinayo qeexitaanno farsamo oo ficil ahaan aan cidina fahmi karin inay tahay mooyee sybarite run ah, ama anigu Aniga qudhaydu waxaan fahansanahay heerarka decibel, impedance ama jargon kale oo badanaa loo isticmaalo kiisaskan. Waxaan si fudud kuugu sheegi karaa in xaga awooda iyo tayada codka ay yihiin dhagaha dhagaha oo aad iyo aad u fiican.
Marka waxaan leenahay heer awood ka badan inta ku filanSi aad u badan ayaan kugula talinayaa inaad iska hubiso heerka mugga badan ee taleefankaaga casriga ah ka hor intaadan dhegaha dhagaha dhegta saarin si aanad u baqin maadaama ay dhawaaqoodu aad u sarreeyaan.
Marka laga hadlayo tayada muusigga, maqalka guud ahaan iyo tayada wicitaannada iyada oo loo marayo hawsha gacmaha-ka-baxsan ee kuwan Wavefun X-Pods, Waa inaan kuu sheegaa inay wax walba sax ka badan yihiin.
Tayada codka ayaa ka dheelitiran nooc kasta oo muusig ah, nooc kasta oo muusig ah ayaa u dhawaaqi doona mid cajiib ah Ilaa iyo intaad haysato feylasha muusikada ee lagusoo rogay taleefankaaga casriga ah tayo wanaagsan, way cadahay inaysan isku mid ahayn in la dhagaysto hees ku jirta qaab mp3 ah oo laga soo dejistay tayada 128 kbps marka loo eego midka lagu soo dejiyey tayada 20 kbps ama lagu soo dejiyey qaab flac ah.
Hadaan ku darno wadarta guud ee saameynta immersion-ka iyada oo ay ugu wacan tahay saameynta faakiyuumka Maxaa inaga dhigaya inaan xirno noocan dhegaha dhagaha, waxaan shaki la’aan isku arkeynaa khibrad maqal oo tayo sare leh oo noo soo bandhigi doonta mowduuca aan dhageysaneyno oo aan dhageysan doono nuxurka heesaheena oo aanan wali maqal.
Marka ay timaado in la waco tayada iyadoo la adeegsanayo kuwan Wavefun X-Pods, tayada maqalka ee wicitaanka iyo sidoo kale tayada codka ee wicitaankeennu helayo ayaa runta ka fiican oo hufan oo ku filan inaad wadahadal la yeelato dhibaato la'aan adigoo isticmaalaya taleefanka dhagaha midig ama bidix ama qaabka Stereo ama qaabka sare ee ku xirnaanta taleefanka casriga ah.
Sida isku xirnaanta, waa in ka badan in lagu adeego iyada Nooca 4.1 isku xirnaanta Bluetooth noo fidinaya a qumman, xasilloon oo aan la jarin waqtiga iyo iswaafajinta nooc kasta oo ka mid ah Android, macruufka terminal, computer shakhsi, iwm, iwm
Isticmaalka, qeexitaannada farsamo qaarkood iyo shaqeynta Wavefun X-pods
Ilaa iyo inta laga faa'iideysanayo, runta ayaa jirta kuwan 'Wavefun X-Pods' ayaa farxad u ah sida ugu habboon ee ay xiran karaanWaxay yihiin kuwo raaxo leh oo xitaa aad iloobi karto inaad xiran tahay.
Haddii aan ku darno tan waxaan haynaa laba sameecado oo aan u adeegsan karno laba waddo, dib u dhigistu waa u qalantaa, qaabka Stereo ama qaabka horumarsan, iyo sidoo kale Waxaan sidoo kale na siisay suurtagalnimada inaan u adeegsanno si shaqsi ah si aan ula wadaagno lammaanaheenna, asxaabta ama carruurta, waxaan shaki la'aan nahay wax soo saar heer sare ah.
Ku saabsan batteriga isku dhafan ee Wavefun X-Pods, waxaan leenahay a 45 mAh baytariyada lithium-ion dib loogu shubi karo mid kasta oo ka mid ah dhegaha, Tani waxay na siineysaa madax-bannaani si aan u dhageysano muusikada si aan kala go 'lahayn ugu dhowaad 8 oo leh hal lacag, haddii aan ku darno tan iyada oo ay ugu wacan tahay sanduuqkeeda waxaan had iyo jeer qaadnaa batteri si aan ugu soo dallacno isla marka aan soo qaadno dhagaha dhagaha oo aan dhigno. waxaa, sanduuq leh awood ku-shubasho oo ah 220 mAh, waa inaan dhahnaa waxaan ka horreynaa dhagaha dhagaha oo na siiya a ismaamul ka badan ama ka yar 24 saacadood haddii aan ka baxno guriga anagoo dhagaha la buuxinay iyo bangiga korontada oo si buuxda u shaqeeya.
In kasta oo shaqsiyan aanan awoodin inaan xakameeyo waqtiga lacag bixinta ee sanduuqa X-Pods, si aan u buuxiyo 220 mAh waxaan u baahanahay ilaa saacad, halka si buuxda aan uga dhageysano samaacadaha sanduuqa laftiisa, waxaan u baahan doonaa oo kaliya 30 daqiiqo si aan u helno.
Sida loo waafajiyo Wavefun X-Pods
Habka keli ah iyo qaabka rikoodhka
Marka la isku daro ama la is waafajiyo mid kasta oo ka mid ah sameecadaha dhagaha ee qaabka shaqsiga, way fududahay sida u suurto gelineysa Bluetooth-ka xaruntaada, sameynta muuqaal ahaan iyo siinta si ay u raadiso aalado cusub inta aan hoos u dhigeyno badhanka mid ka mid ah sameecadaha. midka aan dooneyno in aan uga waafajino qaab shaqsiyeed shan ilbidhiqsi illaa aad ka maqasho erayga "Isku xidhka"Waqtigaas waxaan sii deyneynaa badhanka korontada, waxaan raadineynaa X-Pods R ama L shaashadda Android-keena raadinta aaladaha cusub ee Bluetooth oo waxaan gujineynaa dhagaha gaarka ah.
Qaabka Stereo waa isku mid tan iyo markii ugu horreysay waa inaan raadinaa oo is waafajinnaa taleefanka dhagaha oo shaqsi ahaan loo sameeyaa, ka dib, marka taleefanka dhegaha la galiyo midba gooni, si loogu isticmaalo qaabkan Stereo waxaan kaliya u baahan doonnaa saar dhagta midig oo shid ilaa aad ka maqasho erayga "Connected" ka dibna sidaas oo kale ku samee dhegaha kale.
Habka Sare (Tayada ugu Badan ee Codka)
Si aan ula jaanqaadno qaab horumarsan, waxaan marka hore is waafajin doonnaa ama aan isku wehelin doonnaa taleefanka dhagaha midig sida aan ku sharaxay korka khadadkaas. Mar alla markii aan helno taleefanka dhegaha midig, waxaan daminaynaa gebi ahaan labada dhegoodna waan iska saaraynaa dhegaha. Marka dhagta xirmada kasta la dhigo dhegtaada saxda ah, waa inaanu yeelnaa oo keliya riix oo hayso labada badhan ee korontada isla waqti isku mid ah illaa toban ilbidhiqsi illaa erayga "Isku Xidhan" laga maqlayo labada dhegaha.
Tan waxaa la samayn karaa iyada oo aan marka hore la isbarbar dhigin boodhadhka bidix.
Fikradahayga shaqsiyeed iyo isku xirka iibka Amazon
Naqshad casri ah iyo xarrago leh
Is-maamul aad u wanaagsan
Qiimo la awoodi karo
Iyagu ma laha xakameyn mug leh
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Reviews » Dib u eeg Wavefun X-Pods, qaar ka mid ah taleefannada dhagaha ee Apple Airpods oo tayo leh oo keliya 55 Euro oo laga heli karo Amazon Prime
Iyagu waa isla Qcy Q29 oo lagu iibiyo Amazon muddo 42 ah iyo toddobaad ka hor oo lagu iibiyo 33, taas oo ay dhowr jeer dhigeen. Mar dambena kuma sheegi doono Gearbest inaan ku iibsado wiilkayga 28 euro.
Waxaan kala kulmay khibrad xun Gearbest
Qiimuhu macnaheedu maahan wax walba, maxaa yeelay bogga aad ka tiri gearbest, waxaan kula kulmay khibrad aad u xun dukaamaysiga iyaga. sidoo kale
Ku jawaab Jacky
Juan Jose Nieto Salicio dijo
Waxaan iibsaday Wavefun X-Buds ka dib markaan arkay dib u eegista androidsis, waan ku faraxsanahay. Tani waa summad heer sare ah.
Jawaab Juan Jose Nieto Salicio
10 tallaabo oo loogu talagalay marka mobiilkaaga la xado
Sony Music ayaa ku dari doonta taageerada Android Auto aad ugu dhaqsaha badan